Who were Bengali, so called Rohingya?: ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘာလဲ..။
( နိုင်ငံတကာမှာ ပြောဆိုနေတဲ့ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ဘာလဲဆိုတာနဲ့ ပတ်သက်ပြီး
စစ်သည်ဟောင်း တစ်ဦးရဲ့ ကိုယ်တွေ့ အတွေ့ အကြုံတစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်။
မျိုးချစ်စိတ် ရှိသူများအတွက် မျှဝေပေးလိုက် ပါတယ်။ )
သမိုင်းတစ်ကွေ့ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံများ အကြောင်းရေးဖို့ အချက်အလက်တွေ
ပြန်ရှာနေ တုံး ရေဒီယိုမှာ၊ အင်တာနက်မှာ ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည်ဆိုတာတွေ
ကြားရသည်။ အစိုးရကို ဆန့်ကျင် နေ သူများကလည်း ဘာဖြစ်ဖြစ် အစိုးရကို
ဆော်ဖို့အခွင့်အရေးရင် မနည်းဘူးဆိုပြီး ရိုဟင်ဂျာတွေကို ဂရုဏာသက်စရာ
အဖိနှိပ်ခံများအဖြစ် ဘေးတီးပေးကြသည်။ ထိုလုပ်ရပ်သည် မည်မျှ အန္တရာယ်ကြီး
သည်ကို ထိုသူတွေသိပါရဲ့လား။ ကျွန်တော် ၀န်ထမ်းဘ၀ တစ်လျှောက်တွင်
နှစ်အတော်များများ ရခိုင် ပြည်နယ်မှာ နေခဲ့သဖြင့် ဒီပြဿနာကို
ထိတွေ့ခဲ့ရသဖြင့် သိသမျှကို ဝေမျှလိုက်ပါသည်။ ဘယ်သူမှန် ပြီး
ဘယ်သူမှားသည်ကိုတော့ စာဖတ်သူ လူငယ်များသာ စဉ်းစားကြပါ။
ပထမဆုံး ပြောလိုသည်က ရိုဟင်ဂျာဆိုသော စကားလုံးဖြစ်သည်။ ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာကို
မူဆလင်ဘာသာဝင် လူမျိုးတစ်မျိုးအဖြစ် ပြောနေသည်။ ကျွန်တော်
စိန်ခေါ်လိုပါသည်။ မြန်မာဘုရင် လက်ထက် စစ်တမ်းတွေ၊ အင်္ဂလိပ်
ဂေဇက်တီးယားတွေ၊ သမိုင်းတွေ၊ လွတ်လပ်ရေး ရပြီးခေတ် မှတ် တမ်းတွေမှာ
ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးဆိုသည့် စကားလုံး ရှာကြည့်စမ်းပါ။ ဘယ်တော့မှ
တွေ့မည်မဟုတ်၊ အင်္ဂလိပ် လက်ထက်က ကောက်ခဲ့သော သန်းကောင်စာရင်းများ၊
လွတ်လပ်ရေး ရပြီးနောက် ကောက်ယူခဲ့သည့် သန်းကောင်စာရင်းများတွင်
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဟု မရှိပါ။ ရိုဟင်ဂျာဆိုသော စကားလုံးမှာ စစ်တကောင်း
ကုလားများက ရခိုင်ပြည်သားများကို ခေါ်သည့် ရိုဟင်ရှာ ဆိုသည့် စကားက
လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဘင်္ဂလားကုလားများက သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်ပြည်သား
နံမည်ခံလိုသဖြင့် ဒီစကားကို ၁၉၅၀ ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်
တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီ့အရင်က ဒီကုလားများအတွက် နံမည်ရှိပြီးသား
ဖြစ်သည်။ ဒါကတော့ ကုလားဆိုး သို့မဟုတ် မူဂျာဟစ်များ ဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလားပြည်နယ်နှင့် နယ်ချင်းဆက်နေသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယခင်က
မူစလင်ကုလားများ ရှိခဲ့သည်။ သို့သော် ဒီလူတွေက ဒေသခံများမဟုတ်။
ရခိုင်ဘုရင်များ စစ်နိုင်သဖြင့် ဖမ်းလာခဲ့သူများ၊ ရခိုင်လယ်ယာ
မြေများတွင် အလုပ်ကြမ်းလာ လုပ်သူများဖြစ်သည်။ ဘိုးတော်ဘုရား လက်ထက်
စစ်တမ်းတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်၌ ဘင်္ဂလားကုလား သုံးသောင်းကျော် ရှိသည်ဟု
ဖော်ပြခဲ့ဖူးသည်။ အင်္ဂလိပ်လက် အောက်ရောက်သောအခါ မြန်မာနိုင်ငံသည်
အန္ဒိယနိုင်ငံ၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုဖြစ်သည့်အခါ ကုလားတွေ တံခါးမရှိ၊
ဓားမရှိဝင်လာကြသည်။ ဆင်းရဲတဲ့ ကုလားတွေက လယ်ကူလီ လုပ်သည်။ ချမ်းသာတဲ့
ကုလားက ငွေတိုးချေးစားသည်။ အင်္ဂလိပ်က စူးအက် တူးမြောင်းကြောင့်
စပါးဈေးကောင်းတော့ လယ်သစ်တွေဖော်ဖို့ ကုလားတွေ ခေါ်လာသည်။ ထိုအချိန်က
တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ် ဘင်္ဂလားက ကုလားတွေကို သဘောင်္နဲ့ သွင်းကြောင်း။
သဘောင်္ခကို အထူးနှုန်း သတ်မှတ်ပေးခဲ့ကြောင်း ရှေ့မီနောက်မှီ
ရခိုင်လူကြီးများက ရှင်းပြဖူးသည်။ သေချာသည်ကတော့ အင်္ဂလိပ်လက်အောက်ရောက်စ
၁၈၃၂ ခုနှစ် စာရင်းအရ လူဦးရေ တစ်သိန်းခွဲရှိသည့် ရခိုင်ပြည်နယ်သည် ၁၉၃၂
ခုနှစ် သန်းကောင်စာရင်းအရ စစ်တွေခရိုင် တစ်ခုတည်း၌ပင် လူဦးရေ
ခုနှစ်သိန်းခွဲ ရှိနေတာတွေ့ရ၏။ ထိုကဲ့သို့ ချက်ခြင်း တိုးလားသည့်
လူများမှာ အင်္ဂလိပ်တို့ နေရာချပေးခဲ့သည့် ဘင်္ဂလား ကုလားများပင် ဖြစ်သည်။
ထိုကဲ့သို့ တိုးလာသည့် ကုလားအများစုမှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် နယ်နမိတ်ချင်း
ဆက်နေသည့် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသတွင် နေထိုင်ကြသည်။ ထိုအချိန်က
ထုတ်ခဲ့သည့် အင်္ဂလိပ် အစိုးရ ဘားမားဂေဇက် စာအုပ်တွင် ၁၈၇၁ ခုနှစ်တွင်
မောင်တော မြို့နယ်၌ မူဆလင် ကုလားနှစ်သောင်း ရှစ်ထောင်ကျော် ရှိရာမှ ၁၉၁၁
ခုနှစ်တွင် ကုလား တစ်သိန်းခုနှစ်သောင်းကျော် ဖြစ်လာသည်ဟု ဆိုသည်။
ထိုဒေသတွင် ရောက်လာသော ကုလားများမှာ တစ်ဖြေးဖြေးနှင့် ရခိုင်များကို
မောင်းထုတ်ရန် ကြိုးစား လာခဲ့သည်။
ယနေ့အထိ ရခိုင်လူမျိုးတို့ မေ့မရသည့် ကိစ္စတစ်ခုမှာ ၁၉၄၂ ခုနှစ် ရခိုင်-
ကုလား အဓိကရုဏ်း ဖြစ်သည်။ ရခိုင်ပြည်နယ်မှ အင်္ဂလိပ်တပ်များ
ဆုတ်ခွာသွားပြီး ဘီအိုင်အေတပ်များ ရောက်မလာမီ ကြားတွင် ဘူးသီးတောင်၊
ရသေ့တောင်နဲ့ မောင်တောနယ်တွေမှာ ရှိသည့် ရခိုင်ရွာများကို ဘင်္ဂလာလီ
ကုလားများက မီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်း၊ လူသတ်ခြင်းများ လုပ်ခဲ့သည်။
မြေပုံမြို့နယ်တွင် ရခိုင်လူမျိုး သူကြီးတစ်ဦးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့သည့်
ကုလားနှစ်ဦးကို ရွာသားများက သတ်ပစ်ရာမှ စခဲ့သော်လည်း နောက်ဆုံးတွင်
နယ်စပ်ဒေသမှ ရခိုင်လူမျိုးများကို ယခုခေတ်အခေါ် လူမျိုးတုံး
သတ်ဖြတ်ခြင်းဖြင့် အဆုံးသတ် သွားခဲ့ရသည်။ ဆုတ်ခွာသွားသည့် အင်္ဂလိပ်
တပ်များက နယ်စပ်ဒေသ ကုလားများကို လက်နက်များ ထုတ်ပေးပြီး နယ်ခြားစောင့်
တပ်သဖွယ် တာဝန်ပေးခဲ့ခြင်းကြောင့် အခြေအနေပိုဆိုး သွားခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
ထိုပြဿနာကြောင့် ရခိုင်လူမျိုး နှစ်သောင်းခန့် သေဆုံးသည်ဟု
ရှေးလူကြီးများက ပြောကြ သော်လည်း အထောက်အထား မတွေ့ရ။
စစ်ပြီးခေတ် ကတ်စ်ဘီအစိုးရ အစီရင်ခံစာတွင် ထိုအချိန်က ရခိုင်ပြည်နယ်
တောင်ပိုင်းသို့ ထွက်ပြေးလာသော ရခိုင်လူမျိုးများကို ပြန်လည် နေရာချ
ပေးရာတွင် မူလက မောင်တောဒေသတွင် ရခိုင်ရွာ ၁၂၉ ရွာရှိခဲ့ရာ ၆၈
ရွာသာပြန်လည်ထူ ထောင်နိုင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။ ထိုအချိန် ကစပြီး
ဘင်္ဂလီ ကုလားတို့က ဘူးသီးတောင်၊ မောင် တော ဒေသတွင် လူများစု
မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးအတွက် ကြိုးပမ်းနေချိန်တွင် အန္ဒိယနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေး
အတွက် ကြိုးပမ်းမှု များလည်း တစ်ပြိုင်တည်း ပေါ်ခဲ့သည်။
ထိုသို့ဆောင်ရွက်စဉ် အန္ဒိယနိုင်ငံထဲမှ မူဆလင် အများစု နေထိုင်ရာ
ဒေသများကို ခွဲထုတ်ပြီး ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ ထူထောင်ပေးရေး လှုပ်ရှားမှုများ
ပေါ်လာ၏။ ထိုသို့ ဖွဲ့စည်းမည့် ပါကစ္စတန် နိုင်ငံတွင် ဘင်္ဂလားပြည်နယ်က
အရှေ့ပါကစ္စတန် အဖြစ် ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ဘူသီးတောင်၊ မောင်တော ဒေသက
ကုလားများကလည်း ထိုဒေသများကို ပါကစ္စတန်နှင့် ပူးပေါင်းရန်
၁၉၄၇ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း
လန်ဒန်သို့ လွတ်လပ်ရေး ဆွေးနွေးရန်အသွား အန္ဒိယနိုင်ငံတွင်
ခေါင်းဆောင်ကြီး နေရူးနှင့် တွေ့ခဲ့သည့် အကြောင်း ကြားဖူးကြ ပါသည်။
သို့သော် ထိုခရီးစဉ်တွင် ဗိုလ်ချုပ်သည် ပါကစ္စတန်နိုင်ငံ သမ္မတဖြစ်လာမည့်
အလီဂျင်းနားနှင့် တွေ့ခဲ့သည်ကို သိသူနည်းပေလိမ့်မည်။
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း၏ လွတ်လပ်ရေးကြိုးပမ်းမှု မှတ်တမ်းစာအုပ်တွင်
ဗိုလ်ချုပ်နှင့် တွေ့ဆုံပြီးနောက် အလီဂျင်းနားက ဘူသီးတောင်၊ မောင်တော
ဒေသကို ပါကစ္စတန်နိ်ုင်ငံအတွင်း ထည့်သွင်းရန် တောင်းဆိုမှုများကို
လက်မခံကြောင်း၊ ထိုဒေသများသည် မြန်မာပိုင် ဖြစ်သည်ကို အသိအမှတ်
ပြုကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်ဟု ဖော်ပြထားပါသည်။
ထိုတောင်းဆိုမှုများ မအောင်မြင်သည့်အခါ မူဂျာဟစ် အမည်ခံ ကုလားဆိုး
သောင်းကျန်း သူများ ပေါ်လာသည်။ နယ်စပ်ဒေသတွင် အခြေခံပြီး ဘူးသီးတောင်၊
မောင်တော ဒေသကို သီးခြားပြည်နယ် ထူထောင်ဖို့ လုပ်ခဲ့သည်။ အစိုးရ
စခန်းများကို တိုက်သည်။ ရခိုင်လူမျိုးများကို မောင်းထုတ်သည်။
တပ်မတော်ကလည်း ကေအင်ဒီအို အရေးနှင့် လုံးပန်းနေရသဖြင့် အမြစ်ပြတ်အောင်
မတိုက်နိုင်၊ ၁၉၅၄ ခုနှစ်မှသာ နယ်စပ်ရှိ မူဂျာဟစ်တို့၏ တောင်ပြိုစခန်းကို
သိမ်းပိုက် နိုင်ခဲ့သည်။ ထိုအချိန်က သတင်းစာများကို ပြန်ဖတ်လျှင် ၁၉၄၈ မှ
၁၉၅၄ အကြားတွင် ကုလားဆိုးဟု သတင်းစာများက ခေါ်သည့် မူဂျာဟစ်များ မည်မျှ
သို့သော် စစ်ရေးတွင် အရေးနိမ့်သွားသည့် ကုလားများက နိုင်ငံရေးနယ်တွင်
ခေါင်းထောင်လာ ပြန်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ခေါင်းထောင်နိုင်ခြင်းမှာမူ ဖဆပလတွင်
တာဝန်ရှိပေသည်။ ထိုအချိန်က ရခိုင် ဒေသ ( ပြည်နယ်မဖြစ်သေး) တွင် ဖဆပလက
အင်အားမကောင်းပဲ ရခိုင်တိုင်းရင်းသား စည်းလုံးညီ ညွတ်ရေးအဖွဲ့ ရတညက
အင်အားကောင်းသည်။ ထိုအခါ ဖဆပလက ဘင်္ဂလီကုလားများကို ဖဆပ လအတွင်းဝင်ရန်နှင့်
ကုလားများမှာ ကုလားသူကြီးက ထောက်ခံစာရေးပေးလျှင် မဲပေးခွင့်ရခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့် အဒူဂေါ်ဖား၊ စူလတန် အာမက်၊ အဘူခိုက်၊ အဘူဘော်ရှော့ ဆိုသည့်
မုတ်ဆိတ်ဖားဖား ကုလားများသည် ဖဆပလ အမတ်များ ဖြစ်လာသည်။
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန ပါလီမန်အတွင်းဝန် အဖြစ် စူလတန်မာမွတ်
ဆိုသူဖြစ်ခဲ့ဘူးသည်။ လ၀က အတွင်းဝန် ကုလားတစ်ယောက်လည်း ရှိခဲ့သေးသည်။
နံမည်မမှတ်မိတော့။ ကုလားကို လ၀က အတွင်းဝန် ခန့်ခဲ့သည်ဆိုလျှင်
ဘာတွေဖြစ်မလဲ စဉ်းစားသာ ကြည့်ပေတော့။ ထိုခေတ် ဖဆပလ အစိုးရက ရာသီအလိုက်
စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများတွင် လုပ်ကိုင်ရန်အတွက် အရှေ့ပါကစ္စတန်မှ
ကုလားများကို ပါမစ်ဖြင့် ၀င်ခွင့်ပြုခဲ့သည်။ ထိုသို့ဝင်လာသူ အများစုက
ပြန်မသွားပဲ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောဒေသတွင် ကျန်နေခဲ့သည်။ ၁၉၅၉ ခုနှစ်
အိမ်စောင့်အစိုးရတက်မှသာ ထိုသို့ ပါမစ်ဖြင့် ၀င်ခွင့်ပြုခြင်းကို
ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသည့် စကားလုံးကိုလည်း ၁၉၅၁ ခုနှစ်တွင် ဖဆပလ
အမတ်ဖြစ်နေသည့် ကုလားများက စတင်တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့
သူတို့ကိုယ်သူတို့ ရခိုင်မူဆ လင်ဟု ဆိုသည်။ တကယ်တော့ ကုလားသည် ကုလား၊
ရခိုင်သည် ရခိုင်သာဖြစ်၏။ ရခိုင်လူမျိုးတွင် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာရှိသည်။
တော်လှန်ရေး ကောင်စီလက်ထက်တွင် နယ်စပ်ဒေသ၌ ခိုးဝင်မှုများ ရှိသေးသော်လည်း
ယခင် ကလောက်မများတော့။ ကုလားဆိုးများလည်း နိဂုံးချုပ်သွားသည်။ သို့သော်
၁၉၇၄ ခုနှစ် အခြေခံ ဥပဒေအတွက် ပြည်သူများထံမှ
အဆိုပြုချက်များတောင်းသည့်အခါ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တောက ကုလားများက
ဘူးသီးတောင်၊မောင်တောဒေသကို မေယုတိုင်းဟု သီးခြားဖွဲ့စည်းရန်။
အလံတွင်လည်း ကြယ် ၁၄ လုံးအစား ၁၅ လုံးထည့်ပေးရန်
စာတမ်းများပြုစုတင်ပြခဲ့သည်။ အတော်ပင် အရှက်မဲ့ ရဲတင်း သောလုပ်ရပ်ဖြစ်၏။
ဤသို့ဆိုလျှင် ရိုဟင်ဂျာဆိုသည့် လူမျိုးရှိမရှိဆိုသည်ကို
ရှင်းလောက်ပြီဟုထင်ပါသည်။ ထိုသို့ ခိုးဝင် အခြေချနေသည့် ကုလားများကို
စိစစ်ရန်အတွက် လမ်းစဉ်ပါတီ အစိုးရ လက်ထက်က ၁၉၇၈ ခုနှစ်တွင် လည်းကောင်း၊
န၀တ အစိုးရ လက်ထက်က ၁၉၉၁ ခုနှစ်တွင်လည်းကောင်း မှတ်ပုံတင်စိစစ်မှုများ
ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ထိုသို့လုပ်တိုင်း မှတ်ပုံတင်မရှိသည့်ကုလားများက
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှဘက်သို့ ထွက်ပြေး ပြီး သူတို့ကို မြန်မာအာဏာပိုင်များက
နှိပ်စက်သဖြင့် ထွက်ပြေးလာရပါသည်ဟု အော်သည်။ နှစ်ကြိမ် လုံးတွင်
မြန်မာဘက်က လွတ်လပ်ရေးမရမီ ကာလထဲက မိဘများ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်နေခဲ့ကြောင်း အထောက်အထား ပြနိုင်သူများကို
ပြန်လက်ခံခဲ့သည်။ ထိုအခါ ခိုးဝင်လာ သူတွေက ဒုက္ခသည် နံမည်ခံပြီး
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ ကျန်နေခဲ့ပြီး ရိုဟင်ဂျာ ဒုက္ခသည် ဟု နံမည်ခံလာကြသည်။
ရိုဟင်ဂျာတပ်ဦး ဆိုပြီး သောင်းကျန်းသူ အဖွဲ့ဖွဲ့သည်။
အခု ထိုင်းမှာ၊ မလေးရှားမှာ ရှိနေသည့် ရိုဟင်ဂျာ ဆိုသူများသည်
ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှ မှ ထွက်ခွာလာသည့် ကုလားများသာဖြစ်သည်။ ထိုနိုင်ငံတွေကို
သွားသလို မြန်မာနိုင်ငံထဲသို့လဲ ခိုးဝင်ဖို့ ကြိုးစား နေဆဲဖြစ်သည်။
ဒါ့ကြောင့်လဲ အစိုးရက နယ်စပ်မှာ လ၀ကတွေကို အများအပြား ချထားပြီး နယ်စပ်
ဒေသကို ထိန်းသိမ်း နေရသည်။ သို့သော် ကုလားများက မြန်မာနိုင်ငံမှ
ထွက်ပြေးလာသည့် ရိုဟင်ဂျာ များဖြစ်သည်၊ မြန်မာတို့က နှိပ်စက်သဖြင့်
ထွက်ပြေးလာရပါသည်ဆိုပြီး ထိုင်းမှာ၊ မလေးရှားမှာ နိုင်ငံ
ရေးခိုလှုံခွင့်ရအောင် ကုလားမူ၊ ကုလားချွဲလုပ်သည်။ ဘာအကြောင်းဖြစ်ဖြစ်
မြန်မာအစိုးရကို တွယ်ဖို့ အခွင့်အရေးရလျှင် တော်ပြီဆိုသည့် အတိုက်အခံ
များကလည်း ရိုဟင်ဂျာ ပြဿနာကို မြန်မာအစိုးရ၏ နောက်ထပ် လူ့အခွင့်အရေး
ချိုးဖောက်မှု တစ်ခုအဖြစ် ပုံဖော်နိုင်အောင် မီဒီယာ ပေါ်တင်လာကြသည်။
သို့သော် ယခုကိစ္စသည် တပ်မတော် အစိုးရနှင့်သာ သက်ဆိုင်သည့် ကိစ္စမဟုတ်၊
နည်းမျိုးစုံဖြင့် ထိုးဖောက် လာခဲ့သည့် ကုလားများက သမိုင်းတွင် မရှိသည့်
လူမျိုးစုနံမည်ကို ဖန်တီးပြီး မြန်မာနိုင်ငံထဲတွင် တရားဝင်ခြေကုတ်ယူဖို့
လုပ် လာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒီမိုကရေစီ ပြဿနာ မဟုတ်ပါ။ လူ့အခွင့်အရေး ပြဿနာ
မဟုတ်ပါ။ မိမိတို့ချင်း သဘောထား ကွဲပြားမှုများကို ဘေးချိတ်ပြီး
ရိုဟင်ဂျာသည် မြန်မာတိုင်းရင်းသား မဟုတ်ကြောင်း နိုင်ငံ တကာမျက်နှာစာမှာ
ခိုင်ခိုင်မာမာ ရပ်တည်ရမည့် အချိန်ဖြစ်ပါ၏။
Posted by ရခိုင်ချစ်သူချေ at 11:27 AM
zaw lwin said...
why these racist activities. time will decide all.
How could you accept your country as Buddhist country and cannot accept Rohingya as ethnic group which were done by U Nu and the first president of Burma after independent? If you don't agree with what U Nu said and done, then your country should not be Buddhist country either. Think you so called kind peace loving Kalar worshipping ugly fascist if you have brain and heart.
Comment for Oklahoma Ko Ko article 'the burning of the west'
The word Bangali was used time and time again whereas the people from both sides are suffering greatly when some bias, manipulated author was promoting the cheap nationalism. Even the local were called Bangali in Sittwe in your article. How come?